ရှေ့တောင်နေပြည် ပုဂံဆီဝယ်ဒီဇင်ဘာ လတိုင်း ခရီး ထွက်လေ့ရှိတဲ့ ကျွန်မ ဒီနှစ်မှာတော့ သင်္ကြန် တွင်းမှ ခရီး ထွက်ဖြစ် ပါတော့တယ်။
... Read More >> နီတျာကြည်မြ၏ အတွေးနှင့် မောင်ဝဏ္ဏ၏ အရေးကျွန်မတို့ အဖေသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အဖြစ်ဖြင့် မိသားစု စားဝတ်နေရေး အတွက် ကျွမ်းကျင်ရာ အခြား လုပ်ငန်းများကို အခွင့် သင့်သလို လုပ်ကိုင်ရင်း ၀ါသနာ အလျောက်စာရေး၊ စာဖတ်ပြုနေသူ ဖြစ်ပါသည�... Read More >> ဒုတိယ အတွေးSeconds Thought လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ဒုတိယ အတွေးဆိုတာ ပထမအတွေး (First Thought) ထက် နောက်ကျပြီး ဒါမှမဟုတ် ပထမ အတွေးနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် တည်း ဖြစ်ပေါ်လာလေ့ ရှိတယ်။
... Read More >> အိပ်မက် ရွာကလေးသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာxxxနေညိုချိန် တိမ်တောက်တဲ့ အခါ ရွာလမ်း နံဘေးမှာxxxစာဥတို့ သူငယ်ချင်းမတွေ ရေခပ် ဆင်းလို့လာxxxသီချင်းလေးသံသာ မရောက်တာ ကြာပြီxxxမတွေ့တာ ကြာပြီxxx သတိရလိုက်တာ စာ...စာ...ဥ...ဥxxxx
... Read More >> (Aug-2012)ထာဝရ အတွက် ပထမခြေလှမ်းအရမ်း ကောင်းနေပါလား ကျွန်တော် အမှားတွေ လုပ်နေမိပြီဆိုရင် ကျွန်တော့် မိသားစုဝင်တွေက ဘယ်သူမှ ဒီအတိုင်း လက်လွှတ် မထားတတ်သလို၊ ကောင်းတာ တစ်ခု ခုလုပ်နေရင်လည်း ကျွန်တော့်ဘက်က အမြဲ ရပ်တ�... Read More >> (Aug-2012)ဝေါဟာရမှော်ရုံတောမှာငိုသူတွေကို ငိုအဖွဲ့ ကူမယ်(NGO) လူတစ်ဦးစီဟာ လောကကြီးမှာ အထီးထီး ရပ်တည် နေထိုင်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ လူဖြစ်လို့လူ့ အဖွဲ့အစည်း(Human Society) အတွင်းမှာ နေထိုင်ရပါတယ်။
... Read More >> လူငယ်တိုင်းရဲ့ နေရာ၊ နေရာတိုင်းရဲ့ လူငယ်ဖူးငုံတို့ အားလုံး ကျန်းမာကြဖို့ ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ ဒီလအတွက် နှုတ်ခွန်း ဆက်လိုက် ရပါတယ်။ ဘ၀မှာ ကျန်းမာဖို့က အဓိကမဟုတ်လား။ ကျန်းမာမှ ဘ၀ကို အောင်မြင်အောင်၊ အဓိပ္ပာယ် ရှိအောင် ကြိုးစ�... Read More >> လက်ရှိ ဘ၀ကနေ လွတ်မြောက်အောင် မကြိုးစားဘဲ ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ စွမ်းသူလူ့လောကထဲကို လူသားတွေက ပုံသဏ္ဌာန် မျိုးစုံ၊ ဘ၀ မျိုးစုံ၊ စိတ်ဓာတ်မျိုးစုံ၊ စရိုက် မျိုးစုံနဲ့ ၀င်ရောက် လာကြပါတယ်။ ဘယ်လို ကွဲပြားခြား နားမှုတွေ ရှိနေပါစေ။ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ လူ့လောက... Read More >> အမေ့ရဲ့ အိမ်လောကရဲ့လမ်းများအပေါ် လျှောက်သွားရင်းနဲ့ မောပန်းနွမ်းနယ်၊ နှလုံး သားက လွမ်းဆွတ်လို့ တမ်းတမိခဲ့ အမေ့ရဲ့အိမ်ကို၊ အေးမြတဲ့ အမေ့ရဲ့ မေတ္တာ ရိပ်နဲ့ဝေးခဲ့သူမို့၊ တစ်ခါတလေ ပြန်လည်တွေး ရင... Read More >> ပျော်ရွှင်မှုတွေ လျှံကျနေတဲ့ ကဗျာကဗျာဆရာဟာ အလွန် စိတ်ချမ်းသာနေပါတယ်တဲ့တကယ့်ကို အလွန်အမင်းစိတ်ချမ်းသာနေတဲ့ပုံနဲ့တစ်လောကလုံးကို ကြေညာလိုက်တယ်
... Read More >> လက်ခုပ်သံ “မြန်မြန် ရတာထက် အဲ့ဒီ စာတစ်ပုဒ်ကို ဘယ်အချိန်ပြန် မေးမေး မထစ်မငေါ့ ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက် ပြန်ဖြေနိုင်အောင် မှတ်မိ နေတာမျိုး ပိုဖြစ်စေချင်တယ်” ထင်သည့် အတိုင်းပဲ လာပါပြီ။
... Read More >> (Aug-2012) လက်သစ်ကဗျာသွေးကြီးတဲ့ အရပ်ဒီအရပ်မှာ တောတွေရှိတယ်တောင်တွေရှိတယ်၊မြစ်ချောင်းပေါတယ်။ပင်လယ်ရှိတယ်၊ သယံဇာတများတယ်။
... Read More >> ရေနီမြောင်းမန္တလေး ဆိုတာနဲ့ ရေနီမြောင်းကို သိကြမှာပေါ့။ မသိရင်တော့ ဆရာမ ဂျူးရဲ့ အမှတ်တရ ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုကိုသာ ရှာဖတ်ပေရော့။ ကျုပ်ကတော့ ရေနီမြောင်းထဲမှာ ရေဆင်းချိုးရင်း တစ်ခါတစ်ခါ စုစုထွေးရဲ့ ခြေ�... Read More >> (Aug-2012)ဖတ်ကြည့်ပါမြလှိုင် ဘ၀နေ၀င်ချိန် ဆရာမြလှိုင်ရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဆိုပေမဲ့ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာထက် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး အတွေ့အကြုံတွေကို ပိုပြီး ဇောင်းပေး ရေးထာ�... Read More >> ဘေးတိုက် အရွေ့ဗျူဟာနံနက် ၅ နာရီမှာ အိပ်ရာ ထရတယ်။ ကိုယ့်အဆောင်က ကျောင်းသားတွေက ကျောင်းသွားဖို့ နှိုးရရင် အနည်းဆုံး မိနစ် ၂၀၊ နာရီဝက်လောက် နှိုးရတာ။ ရန်ကုန် ဆိုတာက ကိုယ်တို့ နယ်မှာလို မဟုတ်ဘူး။
... Read More >> (Aug-2012)Message to teenမာရသွန် အပြေးပြိုင်ပွဲ ဆိုတာ တာတို အပြေး ပြိုင်ပွဲမျိုးထက် ပိုပြီး ခက်ခဲ သလို မာရသွန် ပြေးပွဲမှာ ၀င်ပြိုင်သူတွေကို တာတို အပြေးသမားတွေထက် ပိုပြီး လေးစားကြတာဟာ အဆန်း မဟုတ်ပါဘူး။
... Read More >> ချစ်တတ်ခဲ့တာ အပြစ်လား သီချင်းကို ခံစားခဲ့ကြသူများလူသားတို့ရဲ့ ဘ၀မှာ စိတ်ညစ်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကြိုက်နှစ်သက်လို့ပဲ ဆိုဆို အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းအရာ များကြောင့် သီချင်းများကို နားထောင်လေ့ ရှိကြပါတယ်။
... Read More >> ချစ်တတ်ခဲ့တာ အပြစ်လား သီချင်းကို ဖန်တီး ခဲ့ကြသူများသီချင်းချစ်သူ အများစုဟာ ဖန်တီးသူများ ဖန်တီးထားတဲ့ ခံစားချက်များ အတိုင်းသာ ၀င်ရောက် ခံစားရလိမ့် ရှိကြတယ်။
... Read More >> ကျွန်တော့်ကို ဖြတ်နင်းသွားသော ကတ္တရာ လမ်းမများစက်ဘီး တစ်စီးသာ ဘ၀ဆိုရင် အိအိချိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မျိုးမျိုးအေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဇာခြည်ဦးပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်နဲ့ ဟန်ချက် ညီနေမှာပါ။
... Read More >> ကွဲကြေသွားသော မနက်ဖြန်များသာမန် မနက်ခင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အရာ အားလုံးက သမားရိုးကျ ဖြတ်သန်း နေကြတဲ့ အဲဒီ မနက်ခင်း တစ်ခုမှာ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ တစ်စုံတစ်ခု လိုအပ် နေခဲ့တယ်။
... Read More >> ဆူးဖွဲ့ပိုက်ကွန်၁။ ကြယ်တွေ စုံတဲ့ည သီချင်းက ကျွန်တော့်ကို အတင်း လှုပ်နှိုးနေတယ်။ အိပ်မှုန် စုံမွှားနဲ့ Nokia တံဆိပ် ဟန်းဖုန်းလေးကို ယူကြည့်လိုက်တော့ သဲမောင်။
... Read More >> လူငယ်တွေကို ရှေ့ဆောင်မဲ့ လူငယ် ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံ တစ်ခုမှာ တတိယ အင်အားစု (သို့)အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်း(Civil Society) တွေ အားကောင်းရမယ်၊ လူလတ်တန်းစား အလွှာ ကြီးမားရမယ်လို့ လူမှုရေး သိပ္ပံ ပညာရှင်တွေ၊ နိုင်ငံရေး လေ့လ�... Read More >> အနုပညာ အလုပ်တွေ မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ် ခဲ့ဖူးတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်ဆယ်ကျော်သက် ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းပြီးမှ လူကြီး ဘ၀ကို ရောက်ရှိတာပါ။ ခါးသီးတဲ့ ဆယ်ကျော် ဘ၀တွေကို ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ကြရတဲ့ သူတွေ ရှိသလို ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀တွေကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်... Read More >> ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကောင်းကင်သစ်ကျွန်မတို့ ရွာကို မိုးပေါ်က ပတ္တမြားကြီး တစ်လုံး ပြုတ်ကျလာတယ်။ဒါဟာ ဗြဟ္မာကြီး တစ်ဦးဒါဟာ နောက်ထပ်ဂြိုဟ်အသစ် တစ်လုံးလည်းဖြစ်မယ်
... Read More >> (Aug-2012)သာမန်တို့ရဲ့ အနာဂတ် အိပ်မက်??????????? ?????? ???????????????? ??? ??????????? ????????????? ?????? ??????? ??????? ?????????? ??????? ?????????? ??? ???????????
... Read More >> ခင်မင်မှု အိပ်မက်များ “စာဗျို့ စာ” ခြံဝက စာပို့သမား၏ အော်သံကြောင့်သာ စာကို ထွက်ယူ လိုက်ရသည်။ လူက အူတိအူကြောင်ပင်။ ကိုယ့်ဆီ စာထည့်မည့်သူလည်း တစ်ယောက်မျှ မရှိပါ။ စာအိတ်ပေါ်က နာမည်ကို ကြည့်လိုက်တော့ အေဇင�... Read More >> Choose Your Issue